၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ပါဝင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ နည်းဗျူဟာနှင့်ရလဒ်များ Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, သြဂုတ်လ 13, 2014 အင်္ဂါနေ့, သြဂုတ်လ 12, 2014 Douglas Karr
ကျနော်တို့ထုတ်ဝေပါတယ် Eloqua မှအကြောင်းအရာစျေးကွက်၏အခြေအနေ, အ ၂၀၁၄ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် 2014 အကြောင်းအရာစျေးကွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း... သင်ယခုနှစ်အဓိကအကြောင်းအရာကြည့်ဖို့စတင်နေကြသနည်း
ဤ Uberflip ကနေ infographic B2B နှင့် B2C စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြားလက်ရှိစျေးကွက်အခြေအနေကိုဖော်ပြထားသည်။ လက်ရှိစျေးကွက်များကမည်သည့်နည်းစနစ်များကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသနည်း။ သူတို့မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များကိုသူတို့တွေ့မြင်နေသလား။ အနာဂတ်ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ စုံစမ်းသည်!
ဤအချက်အလက်များသည်ကုမ္ပဏီများရှိအမှုဆောင်အရာရှိများအပေါ်ပိုမိုအာရုံစိုက်သောကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်သည်အထောက်အထား၊ ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၏ရလဒ်များကိုမည်သို့တိုင်းတာသည်ကိုဖော်ပြသည်။ အဆိုပါအားဖြင့်ရည်ညွှန်းအဖြစ် infographic အရသိရသည် အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်စတင်ခြင်းလမ်းညွှန် Demand Metric မှအချက်အလက်များ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်ရိုးရာစျေးကွက်ပုံစံများနှင့် ၇၈% သော CMO များမှစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်အနာဂတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးများဖြစ်သည်ဟုယူဆသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်စျေးကွက်တန်ဖိုး ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းသည်။ အကြောင်းအရာစျေးကွက် Institute က.
Tags: အမ်း Handleyဘလော့ဂ်ပို့စ်များဖြစ်ရပ်တခုအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး 2014အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမွေးစားအကြောင်းအရာစျေးကွက် Institute ကအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး roiအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာမာတိကာဝယ်သူများအယ်ဒီတာအဖွဲ့မဟာဗျူဟာဟိုင်ဒီ cohenဘယ္လိုဂျိုး Pulizziဆင်းသက်စာမျက်နှာများဆောင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Infographicsမင်္ဂလာပါအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတိုင်းတာသတင်းလွှာစာနယ်ဇင်းဖြန့်ချိအလားအလာပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးshane ဆီးနှင်းလူမှုမီဒီယာအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ပြည်နယ်ရိုးရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသွားအလာberရာဝတီဗီဒီယိုများWebinarswhitepapers ကမ်းလှမ်းချက်